Konke Okubandakanya: Ukubonakala kwe-inthanethi okwenziwe ku-3 kuwe
Iwebhusayithi + I-Multimedia Showcase + I-Club Sharing Community ubulungu
izinkampani kanye nabasebenzi
La Isixazululo sonke esifakiwe yiphakeji ye Ukubonakala ezintsha zenzelwe nguTrovaWeb ze izinkampani, lo ibhizinisi eu ochwepheshe abafuna ukuphindaphinda ubukhona babo ku-exponentially kuwebhu.
Kuyinto Isixazululo seDijithali yakhelwe kahle ukukubeka kumakhasi okuqala e Injini yokusesha futhi uqiniseke ukuthi abasebenzisi online ukukuthola ngokushesha futhi kalula.
Isixazululo Konke kubaliwe uzobeka onawo a Iwebhusayithi okusebenzayo, okusebenzayo futhi okunakekelwayo kuzo zonke izici zokuqukethwe nemidwebo. Kepha kuzokunikeza ukuheha iso futhi kube ngokoqobo Umbukiso wemultimedia, yakhelwe ukuvumela ukuthi uxhumane ngokushesha futhi ngokushesha noxhumana nabo. Futhi ukukhipha, ukunikezwa kufaka nokubhaliswa ku- I-Club TrovaWeb, lo Ukwabelana Komphakathi ezinikezelwe ezinkampanini nabachwepheshe abafuna ukugcina amakhasimende ngempumelelo.
Konke yenziwe kahle ngokuphelele ngendlela yokuthi ikubeke ku amakhasi okuqala di -Google.
Kunohlelo oluthembekile noluphephile lokuzikhusela isihlalo sokuqala somugqa emakhasini we -Googleit Injini Yokucinga edume kakhulu emhlabeni. Le ndlela, akulula ukuyisebenzisa kodwa enemiphumela ethile, iqukethe ngokulandela ngokucophelela yonke imithetho enqunyelwe -Google okufanayo ekwakheni ngakunye Iwebhusayithi. Waziwa ngo SEO, le sethi yemithetho iphathelene nobabili izici zemibhalo kunalezo ihluzo, ukungasasho lezo kwesakhiwo e ochwepheshe.
UNella Isixazululo sonke esifakiwe, yiba lapho Umbukiso wemultimedia ukuthi i Iwebhusayithi benziwa ngenhlonipho ephelele kubo bonke standard SEO kudingeka ube ne- isikhundla esiphakeme. Ngakho-ke nokuqinisekisa okuhle ukuma okuhle.
le abasebenzisi online Ngiya ngokuya ngangena ukuhamba. Babheka i-Intanethi lapho behamba, ngezindlela zokuhamba lapho beya emsebenzini noma ngesikhathi samaholidi amnandi. Njalo umzuzu yilapho kufanelekile ukwenza eyodwa ukusesha online. Futhi Yebo Idivaysi kagesi kumele bakwazi ukukhombisa imiphumela abayifunayo ngokushesha nangokuphelele.
I amawebhusayithi eyenziwe iTrovaWeb ifakwe ubuchwepheshe Iselula Ephendulayo, protocol evumela amakhasi e-web ukuzivumelanisa ngokuzenzakalelayo nezikrini zawo wonke amadivayisi eselula. I-Tablet, smartphone, ibhuku lokubhala e ideskithophu bonke bazokhombisa okuqukethwe okufanayo, ngezindlela zesithombe eziguqulwe ngokuphelele kwizikrini zabo.
I-SSL - I-BACKUP
I-TrovaWeb ubambe okuningi ukuvikeleka. Yingakho enika konke okungokwakhe amawebhusayithi i-del Isitifiketi se-SSL, a umthetho wokuphepha yakhelwe ukuvumela amakhasi e-web ukudlulisa futhi ukushintshanisa idatha ngokuphephile. Noma ngabe idatha yomuntu siqu noma ukuthengiselana ngokwezomnotho, konke kuzocutshungulwa ngendlela eboshwe futhi ivikelekile.
Isayithi lakho nalo lizobe liphephe ekuhlaselweni kwangaphandle nasekuphazamisweni.
Njalo Iwebhusayithi eyenziwe yithi ihlala iqhosha i amazinga okuphepha aphezulu kakhulu ngaphezu kwabanye abaningi izici ezithuthukile.
Kulezi, isipele sansuku zonke, okuqinisekisa ukulondolozwa okuhleliwe kwakho konke okuqukethwe nedatha yesayithi lakho, ukuze kungalahlwa lutho.
Kwakho iwebhusayithi intando amakhasi enziwe ozokhuluma ngokuningiliziwe, okuthokozisayo nokujulile mayelana nokwakho umsebenzi nakho konke ongakunikeza abasebenzisi. Isakhi ngasinye se- iwebhusayithi izokhuluma ngawe, isuka kumatheksthi iye kwihluzo, futhi izotshela okungokoqobo kwakho ukuze kudonsele intshisekelo yabasubathi futhi izinjini zokucinga.
Futhi i isizinda kwesiza kuzoba ngokwezifiso futhi iklanyelwe. Ungakwazi, uma ufisa, ukufaka igama lenkampani yakho noma umsebenzi obhekana nawo ekhelini i-url yangokwezifiso okuzokuhlonza ngokuhlukile.
Njalo iwebhusayithi eyenziwe iTrovaWeb ifakwe izakhi eziningi ezithile ukuvumela eyodwa navigation elula, esebenzayo, ewusizo futhi emnandi.
Kokubili amasayithi ethu nawethu Ukukhonjiswa kweMultimedia bahlomethwe isibonelo nge: inkinobho Ukuzulazula kwe-Google Amamephu, izinkinobho zokuqalisa baxoxe kumanethiwekhi omphakathi adume kakhulu njenge-Facebook ne-whatsapp nokunye okuningi.
Uzoba nawo wonke amathuluzi asethuthukile kakhulu wakho ukuxhumana kwenhlangano futhi wandise oxhumana nabo.
Le nostre Imibukiso yemultimedia ebonakalayo zakhiwe ngokucophelela nangobumbano ukukhombisa okwakho ngendlela ehehayo nenhle ngobuhle inkampani o umsebenzi wobungcweti kanye nohlobo lwezinsizakalo ozinikezayo.
Isakhi ngasinye esikhona ku I-Multimedia Showcases TrovaWeb, umbhalo kanye nemultimedia, kumodi yokulinganisa amandla webhizinisi lakho. Izinsizakalo nemikhiqizo, kuhlangene nezinhloso zakho ezinhle, zizofakwa kuqala futhi zenziwe zikhange kumakhasimende izinjini zokucinga.
Ngenxa ye-SEO sikubeka ku-Google ngokoqobo
Noma ngabe iyiphi ibhizinisi elenziwa yinkampani noma ibhizinisi lakho, elethu Umbukiso wegolide izokwazi ukuyithuthukisa futhi izokwazi ukuyikhulisa kahle ukuyibeka ku Injini yokuseshaikakhulukazi -Google, okuchofozwe kakhulu ngabasebenzisi. L 'nokwenza kahle SEO eqinisweni, yi-workhorse yethu enkulu kunazo zonke: imibukiso yethu yenziwe kahle ngazo zonke izindlela ukuqinisekisa ukuthi uyatholakala Injini yokusesha njalo lapho abasebenzisi bafuna imisebenzi efana neyakho.
ITrovaWeb Club: Umphakathi Owabelana ngomqondo omusha wokwethembeka
I-Club yindawo ezinikele ezinkampanini nakubachwepheshe abafisa ukuzuza emandleni aphelele we Ukwabelana Komphakathi. Ngenxa ye-Club yethu, ungashicilela futhi wabelane ngokuqukethwe ngendlela engenamkhawulo. Izithombe, okuthunyelwe, amavidiyo, inhlolovo, amakhuphoni, izimemezelo, okunikezwayo nokuphromotha: ungazishicilela ngokushesha noma nini lapho ufuna futhi uthintane nezinkulungwane zezinkampani nabathengi. Lapho ukugcinwa ka amakhasimende kuzoba nokubonga okulula kakhulu kuleli thuluzi elisebenziseka kalula nelisebenziseka kalula.
Sizokunakekela ukubhaliswa kwakho futhi sikunikeze iziqinisekiso zokufinyelela. Ukuphela kokufanele ukwenze ukungena ngemvume, ukushicilela bese uqala ukujabulela zonke izinzuzo ze Ukwabelana for the ukugcinwa amakhasimende.
Nazi ezinye izibonelo zemisebenzi yethu eyenziwe kuwebhu
Umtholampilo Wezilwane Maesano
www. www /
Ifomula 1 Duke
Imfashini Vape Eliquid
Ikhadi Lethu Ebhizinisi Elikhulu
"... ukumamatheka kwamakhasimende ethu ..."
Kudingekile gcwalisa zonke izinkambu ezidingekayo ukuze uqhubeke.
Faka igama lakho ngomusa.
Ikheli le-imeyili alivumelekile